Voluntary work in Zimbabwe - Volunteer in Zimbabwe & voluntary work programmes in Zimbabwe.
Zimbabwe Career Break Zimbabwe Voluntary Work
Voluntary work in Zimbabwe
Voluntary work in Zimbabwe is a once-in-a-lifetime opportunity to get involved with some truly rewarding wildlife conservation projects. Going on safari is an ideal way to discover African wildlife but, if you are really passionate about animals, voluntary work in Zimbabwe enables you to get even closer to them and do something positive on your Africa gap year at the same time.
Zimbabwe voluntary work
If you would like to do some Zimbabwe voluntary work we have three extremely worthwhile programmes to choose from. Two of our Zimbabwe career break programmes provide the opportunity to get involved with a lion breeding programme. Our other Zimbabwe voluntary work programme is a WWF endorsed project dedicated to saving the gravely endangered black rhino from extinction.
Career break in Zimbabwe
Zimbabwe career break brochure
Filter by: Zimbabwe
Filter by: Activity